Ibrahimovic oo ka gaabsaday in uu ka hadlo mustaqbalkiisa Man United - BBC Somali
Ibrahimovic oo ka gaabsaday in uu ka hadlo mustaqbalkiisa Man United
Image caption Zlatan Ibrahimovic ayaa 20 gool u dhaliyay Manchester United isaga oo u saftay 34 ciyaarood
Weeraryahanka Manchester United Zlatan Ibrahimovic ayaa sheegay in uusan jirin "wax laga qabtay" sidii uu ku sii joogi lahaa garoonka Old Trafford mustaqbalka, laakiin wuxuu ku adkaystay in uu sameeyay waxyaabihii looga baahnaa si uu u kordhiyo wakhtiga qandaraaskiisa.
Ciyaaryahankan reer Sweden oo 35 jir ah, ayaa xagaagii hore ku soo biiray kooxda uu Mourinho tababaro isaga oo sixiixay qandaraas hal sano ah wuxuuna xili ciyaareedkan u dhaliyay labaatan gool.
Mourinho ayaa jimcihii sheegay in uu rumaysan yahay in ninka ugu gool dhalinta badan kooxda uu sii joogi doono garoonka Old Trafford xili ciyaareedka 2017-2018.
Markii la waydiiyay mustaqbalkiisa, Ibrahimovic wuxuu yiri "Waan sugi doonaa waana arki doonaa".
Goolasha Ibrahimovic ayaa ka caawiyay Manchester United in ay gaaraan ciyaarta kama dambaysta ah ee koobka EFL oo ay la dheeli doonaan Southampton, sidoo kalena wuxuu gacan ka siiyay in kooxdu gaarto wareegga shanaad ee koobka FA-ga.
Kooxdan lagu naanayso Red Devils ayaa sidoo kale ka qaybqaadan doonta wareega ciddii laga badiyaa ay harto ee koobka Europa League.
Manchester United ayaa bishii todobaad ku guulaysatay koobka Community Shield, Ibrahimovic-na wuxuu kalsooni ku qabaa in uu ugu yaraan koob kale ku dari doono.
Wuxuu sheegay in ay hadda mid hanteen mid kalana ay ku dari karaan
Labo taageere oo seexday Suuliga garoonka Man United
Mata oo “dareensan inuu muhiim u yahay” Man Utd
Labada Manchester oo laga yaabo in ay fooda isku daraan Maraykanka
"Wali waxaan ka dheelaynaa koobka Europa League iyo FA Cup, marka haddii aanaan hananin Horyaalka Ingiriiska waxaan isku dayi karnaa in aan ku guulaysano labo illaa saddex koob.